guta : University of Ulm
Musakanganwa kuti discuss University of Ulm
The University of Ulm ndiye nenguva wechipfumbamwe muna Baden-Wuerttemberg. Pfungwa dzakavamba yunivhesiti Ulm wokutanga kudzokera okuma50. mu 1959, zvokutsvakurudza boka “University of Ulm” yakaumbwa, iyo pave gwaro iri dzakavamba yunivhesiti muna March 1961. Nokuda makwikwi pakati pamaguta Constance uye Ulm mukutanga mumatanho, pfungwa pave yunivhesiti neimwe maguta maviri akawana mukurumbira. A dzinonetsa chakaita kunotungamirira chisarudzo ichi ndechokuti Constance riri pedyo nomuganhu batana. Mikana basa zvokurapa zvaisazova zvakakwana nokuda kwokushayiwa murwere catchment nzvimbo pamuganhu. Naizvozvo Pfungwa dzakavamba yunivhesiti Ulm akatonyanya kongiri – kwaizova yunivhesiti kuumbwa mushonga uye sayenzi dzinongoitika.
Muna Chikunguru 1965, nheyo komiti pasi ayo “Gwaro pamusoro College of Medicine uye Natural Sciences muna Ulm,” chakarehwa aifarirwa mamiriro Baden-Wuerttemberg kuti kanzuru vashumiri muna January 1966. Kwapera Just mwedzi miviri, ari “Zvokungoitawo Bumbiro of Ulm College of Medicine uye Natural Sciences” akapinda kushanda.
Rorusununguko Natural Sciences
Unoda discuss University of Ulm ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Free University kweBerlin Berlin